Maqaalka Pamela Webber ee Martech Zone |
Maqaallada by Pamela Webber
Khamiista, Noofembar 2, 2017 Khamiista, Noofembar 30, 2017 Pamela Webber
Hubi inaad ka maqashay sheekooyinka jiidaha hore oo aad xitaa dhageysatay digniinta saaxiibbada iyo asxaabta waxtarka leh. Laakiin haddii aad ka mid tahay kumanaan kun oo ganacsadeyaal ah oo u diiwaangashan inay ka soo qayb galaan waallida sannadlaha ah ee Janaayo ee sida fiican loo yaqaan CES (Macaamiisha Elektiroonigga Show) ee Las Vegas markii ugu horreysay sannadkan (Janaayo 9-12th), way adkaan kartaa in si dhab ah loo odoroso maxaa kaa horreeya. Sidee ku saabsan tan: Qiyaas hoolka cabbirka kubbadda cagta ee hoolka ay ku badan yihiin malaayiinta
Waxyaabaha Sameeya iyo Waxyaabaha Aan Lagu Samayn Calaamadaha Fasaxa Sida ku xusan 99designs
Talaado, Oktoobar 18, 2016 Khamiista, Oktoobar 20, 2016 Pamela Webber
Habeennadu way aamusan yihiin, riyooyinka ayaa qallalaya, macaamiishaaduna waxay furayaan boorsooyinkooda. Haddii aad ka dhigi kartid qaybtaada astaanta qayb ka mid ah xilligooda fasaxa si dabiici ah oo soo jiidasho leh, waxay si fiican kuu xusuusan doonaan Sannadka Cusub. Halkan waxaa ku yaal xoogaa waxtar leh oo ah Waxyaabaha iyo Waxyaabaha aan kaa caawin doonin inaad ka gudubto xilliga. Samee: ilaali xaqiiqadaada Haddii durdurkaaga caadiga ah ee warbaahinta bulshada uu ka kooban yahay kaftan xasaasi ah, ku dhaji fariimaha macaan ee farxadda fasaxa
Waxaan aragnay shirkado badan oo u dhaqaaqaya nadiif, khibrad fudud oo loogu talagalay dadka isticmaala bogagga. Haddii aad tahay naqshadeeye, horumariye, ama aad jeceshahay boggaga internetka, waxaad wax ku baran kartaa adoo fiirinaya sida ay u sameynayaan. Diyaar u noqo in laguu waxyoodo! Animation Ka tagida hore, maalmaha xiisaha badan ee webka, oo ay la socdeen gifs biligleynaya, baararka firfircoon, badhamada, astaamaha iyo dhaantada qoob-ka-ciyaarka, animation-ka maanta waxaa loola jeedaa abuurista is-dhexgal, ficillo jawaab celin ah
Isniin, Janaayo 11, 2016 Talaado, Janaayo 12, 2016 Pamela Webber
Dhisida degelku waxay noqon kartaa hawl cabsi badan leh, laakiin haddii aad uga fikirto inay tahay fursad aad dib ugu qiimayn karto meheraddaada oo aad u xoojin karto sawirkaaga, wax badan ayaad ka baran doontaa astaantaada, xitaa waxaad ku raaxeysan kartaa sameynta. Markaad bilawdid, liiskan su'aalaha ah waa inay kaa caawiyaan inaad kugu hagaajiso wadada saxda ah. Maxaad dooneysaa in websaydhkaagu dhammaystiro? Tani waa su'aasha ugu muhiimsan ee laga jawaabayo intaadan guda galin